Happy Birthday Tun Tun Lin, Zude — MYSTERY ZILLION
Happy Birthday Tun Tun Lin, Zude
2 members are celebrating their birthday on 19-02-2009:
-Tun Tun Lin (born in 1983, Age: 26)
-Zude (Age: hidden or unknown)
Zude လေးရေ ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျား
ကိုထွန်းထွန်းလင်း ရောပဲ ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျား
နှစ်ယောက်စလုံး ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အပေါင်းနဲ့ ခညောင်းသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ......
အားလုံးပဲ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ အားလုံးတစ်လုံးတစ်၀ကြီး ပြည့်စုံပါစေဗျာ
Happy Brithday, Ko Tun Tun Lin and Ko Zude,:)
မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။:103::103:
happy birthday အောင်မြင်မှူ့တွေပြည်. ဝကြပါစေ
happy birthday ပါ ကို ထွန်းထွန်းလင်း နဲ့ ကို zude မွေးနေ့မှစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိပျော်ရွှင်စွာ ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါစေခင်ဗျာ:6::6::6:
Ko Tun Tun Lin and Ko Zude.:)
Happy Birthday .................... :6:
Are you2twin brothers ???
May God Bless U two !!!
Happy Brithday ပါ Ko Tun Tun Lin နဲ့ Ko Zude တို့ရေ
Happy and peacefully birthday to မွေးနေ့ရှင် နှစ်ယောက်စလုံး ......
ဟီး.... ကပြားဆုတောင်းလေ... အင်္ဂလိပ်မြန်မာကပြား....
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင် ကြပါစေကြာင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
မွေးနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွားတိုင်ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးလာတော့ .. ပိုပြီးရင်ကျက်လာလိမ့်မယ် ...ပိုပြီး တည် ငြိမ်လာလိမ့်မယ် .. ပိုပြီးသီးခံပါရမီနဲ့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ် .. ပိုပြီးရောင့်ရဲတတ်လာလိမ့်မယ် .. ပိုပြီးကိုယ်ချင်းစာတတ်လာလိမ့်မယ် .. ပိုပြီးခံစားတတ်လာလိမ့်မယ်.. ပိုပြီးနားလည်ခွင့်လွတ်တတ်လာလိမ်မယ် .. ပိုပြီးပေးဆပ်ချင်လာလိမ့်မယ် .. လို့မျှော်လင့်မိပါတယ် .. ဘော်ဘော်ကြီးများဗျား ..